खाडीमा दुख गर्दागर्दै मृगौला फेल भएपछि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिन तनहुँ भानुका किशोरको आग्रह – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. खाडीमा दुख गर्दागर्दै मृगौला फेल भएपछि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिन तनहुँ भानुका किशोरको आग्रह – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
खाडीमा दुख गर्दागर्दै मृगौला फेल भएपछि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिन तनहुँ भानुका किशोरको आग्रह
१६ कार्तिक २०७७, आईतवार November 1, 2020
कार्तिक १६ । तनहुँको भानु नगरपालिका वडानम्वर ७ का किशोर बहादुर पण्डित क्षेत्री परिवारलाई सुखसँग राख्न र भएका ऋण तिरेर सामान्य जिवन जिउन बिदेशीनु भयो । वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवार राम्रै चलेको थियो । ऋण तिर्दै आउनुभएको उहाँ कामकै शिलशिलामा दुबै मृगौला फेल भएपछि नेपाल अाएर अहिले उपचारमै समस्या भएको छ । बिदेशमा कमाएको रकम ऋण तिर्दा र परिवारको दैनिकीमै सकिएको बताउँदै उहाँले उपचारमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
सवैको सहयोग पाए जीवन बचाउन सक्ने आशामा रहनुभएका क्षेत्रीले देश तथा विदेशमा रहनुभएका सवै नेपालीलाई सक्दो सहयोग गरेर आफूलाई बचाइदिन याचना गर्नुभएको छ । १ छोरी समेत रहेकी उहाँले आफू बाँचेर परिवारलाई बचाउने दायित्व रहेको भन्दै सहयोगी मनहरुलाई सकेको सहयोग गरी आफूलाई बचाइदिन अनुरोध गर्नुभएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गत भदौ १४ गते देखि उपचार गराइरहनुभएको छ ।
अस्पतालले भनेको छ,“उहाँको दुवै मृगौला काम नलाग्ने गरी फेल भएको छ। लामो समय डायलासिस वा नयाँ मृगौला हाल्नुपर्ने हुन्छ । यो उपचार खर्चिलो भएकाले कुनै संघसंस्था वा व्यक्तिहरुको सहयोग भए उपचारमा मद्दत मिल्ने छ ।” यसैबीच भानु नगरपालिकाले पनि क्षेत्रीको उपचार निशुल्क गर्न माग गर्दै अस्पताललाई पत्र पठाएको छ ।
नगरप्रमुख उदयराज गौलीको संयोजकत्वमा बैठक बसी निशुल्क उपचारका लागि सिफारिस गरेको हो । तर अस्पतालले सवै उपचार निशुल्क गर्न नसक्ने जानाएपछि आर्थिक सहयोगको अपेक्षा क्षेत्रीले गर्नुभएको हो । दुवै मृगौला फेल भएपछि परिवार कसरी धान्ने र पाल्ने भन्ने चिन्ताले पनि पिरोल्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १६ कार्तिक २०७७, आईतवार November 1, 2020 2027 Viewed
लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना सङ्क्रमण
नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै, ओलीले जवाफी प्रतिवेदन पेस गर्ने
पत्रकार श्रेष्ठलाई पितृशोक, सांसदहरुद्वारा शोक व्यक्त
देशभर थप १ हजार ९४८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,२४ घण्टामा ३ हजार १४० कोरोनामुक्त,२८ को मृत्यु
चितवन मेडिकल कलेजमा ४२ वर्षिय कोरोना संक्रमितको मृत्यु
कोरोनाभाइरसबाट विश्वभर तीन करोड ३० लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित, ९ लाख ९८ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
क्यानाडामा पनि कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री
बन्दिपुरमा मानव निर्मित ताल बन्ने
आजका लागि बोलाइएको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित
मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी मलेसियमा एक नेपालीको ज्यान गयो